Soomaali beera falasho ka bilaabaysa Sweden | Somaliska
Mashruuc cusub oo laga hirgalinayo gobolka Kronoberg ayaa lagu soo bandhigay qorshe Soomaalida looga qeyb galinayo in ay beeralay noqdaan. Mashruucaan ayaa waxaa ka dambeeya shirkad lagu magacaabo Macken i Växjö taasoo ah shirkad beeralay ah.
Qorshaha ayaa ah in Soomaalida horay u ahaan jirtay beeralayda la siiyo waxbarasho ku aadan sidii ay beeralay uga noqon laahaayeen Sweden. Ujeedada mashruuca ayaa ah in shaqo abuuris loo sameeyo Soomaalida.
Asad Abdi oo ka mid ah dadka mashruuca ka qeyb qaadanaya ayaa idaacada Sweden u sheegay in Somalia ay beeralay ahaayeen balse markii ay Sweden yimaadeen aysan arag fursadaha beeraha. Isagoo intaas ku daray in ay fiicantahay in qofku uu sameeyo shaqada uu yaqaano.
Heshiiskii dowlada iyo xisbiga MP oo qarka u saaran burbur
Soomaalidu waa ganacsatada mustaqbalka ee Sweden
Arinta singalka asxabey and jimcaale yaa warka haaya wax is badal ah
Wa fursad wanaagsan e halaga faaideysto.
Hassan walal arinta singalka maxa ula jeeda qof aroos cusub soo sameynaaya oo hada soo guursanaya ama kuwa hore isu sheegtay lakin kala maqan rabana ineey midooaan, hadii aan kuu wada kulmiyo jawaabta,, walaal dowlada aya waxey go’aan ku gaartay in cid kasta oo rabta in aay visa swedish hesha, in aay cadeysho cida aay tahay dhalashadeeda qofkii aan cadeyn karin dhalashadiisa in la siin visa qof wax uu yahayba aan la ogeen sida adiga hada sweden kugu heysata oo 8 sano ayad sugeysaa dhalashada wayo ma cadeyn kartid somalinimadada, balse qof passport la aqoonsan heysta wad soo guursan karta sida kenyati Ethiopian ama yemeni..
May 12, 2014 at 08:50
qofki war bixin rabo kusaabsan singel ha ila so xiriro si aan waxa aan qibrad uleeyahay ugu siyaado 0769773210
Dhamaan aad baan u salamaya dhaman iyo jimcaalaba wey fiican tahay in wax la isku faa idiyo Abdi adiga runtii aad baad u mahadsan tahay gaar ahaan aniga waxan ka codsanaya inaad waxad qibrad u leedahay aad iigu soo dirto macloomaad ah emailkaas ugaaska01@hotmail.se adoo mahadsan waayo sxb aniga caas ayaan lee yahay 2009 ayaa iigu danbesay waadna mahadsan tahay walal
May 12, 2014 at 12:43
waan ka iloobay abdi ma joogi wdanka hada saas dardeed iigu soo dir
asc dhamaan asxaabta howlwadeenada ka webka iyo inta kutaxluuqdabada.walaalayaal aniga waxaan ahay qof kucusub dalka mudo 3bilood ah Ayaan joogaa aan jawaabsuge ahay warqdao qaxootinimo oo un ka ah ayaanwatay oo aylaanta socdaalka an u gudbiyay markaan isdhiibayay, hadey jirto cid anigoo kale ah bal iga siiyay fikradrad ama wxa dhici kara mahadsanidiin.
Diini thnks sxb lakin hada maguursan rabo ee xaas ayaan leyahay ciyalna ima heyso marka gorta ay furayan ine isku kenan singelka aya rabay inan ogaado